Masar - BBC News Somali
Posted at 13:11 29 Agoosto 202113:11 29 Agoosto 2021
Ma rumaysan kartaa in nibiriga qaarkii badda iyo barriga ba ku noolaan jiray?
Koox cilmi-baadheyaal taariikhda qadiimka ah oo ka tirsan Jaamacadda Al-Mansuura ee dalka Masar, ayaa helay qalfoof cusub oo ah nooc ka mid ah nibiriyo ahaan jiray barri-biyood oo noolaa 43 milyan oo sannadood ka hor.
Posted at 15:51 25 Agoosto 202115:51 25 Agoosto 2021
"Hal xaasle ah uma qalmo inuu dad kala xukmiyo ama u kala gar-qaado"
Arrintan ayaa dood ka dhalisay baraha bulshada waxayna dadka uga hadlayaan qaabab kala duwan.
Posted at 2:05 16 Agoosto 20212:05 16 Agoosto 2021
Fatwo Al-As-har soo saartay oo xaaraantinimaysay sawirrada jidhka lagu dhigo
Xafiiska Fatwada ee Al-As-har ayaa xaaraantinimeeyey sawirrada jidhka lagu qore ee loo qayaan 'tatoo' waxaanu ku tilmaamay in arintaasi ka mid tahay 'dembiyada waaweyn'.
Posted at 4:37 6 Agoosto 20214:37 6 Agoosto 2021
Waa maxay cuntada Faraaciinta laga soo gaaray ee caanka ka ah Masar?
Waxaa loo yaqaan "cuntada boqorrada" ee Molokhiya oo midabkeedu cagaar yahay, mar ayaa laga mamnuucay Masar sababo la xiriira in ay kordhiso dareenka bani'aadamka.
Posted at 13:36 22 Luulyo 202113:36 22 Luulyo 2021
Ma jiraa "door" Israa'iil uga bannaan xiisadda biyo-xireenka ee Masar iyo Itoobiya?
Wargeysyo Carbeed iyo kuwa Masar ayaa qaadaa dhigay hadallo iyo qoreyaal ay sheegeen xubno baarlamaan Masaari ah oo ku saabsan "doorka" ay Israa'iil ku leedahay xiisadda biyo-xireenka Itoobiya.
Posted at 10:26 15 Luulyo 202110:26 15 Luulyo 2021
"Waxaan ku jiray xilliga dhiigga-caadada, diyaarna uma ahayn in aan galmo sameeyo habeenkaas," ayay tiri.
Posted at 14:01 11 Luulyo 202114:01 11 Luulyo 2021
Xaaskii awoodda badneyd ee Anwar Saadaat
Jihan Saadaat waa xaaskii madaxweynihii hore ee Masar Anwar El Sadaat, waxay Jimcihii ku geeriyootay cisbitaal ku yaalla maagalada Al Qaahira halkaas oo maalmo lagu daweynayay.
Posted at 15:15 7 Luulyo 202115:15 7 Luulyo 2021
Posted at 12:49 27 Juunyo 202112:49 27 Juunyo 2021
"Wixii aan mutay gabdhaha aan dhalay mudan maayaan"
Laba hooyo oo maray FGM ayaa ka sheekaynaya waxay kala kulmeen.
Posted at 10:07 21 Juunyo 202110:07 21 Juunyo 2021
Bog 1 of 12